Abrahama sa ny Devoly no Rain’izy Ireo? | Fiainan’i Jesosy
Abrahama sa ny Devoly no Rain’izy Ireo?
NILAZA NY JIOSY FA I ABRAHAMA NO RAIN’IZY IREO
EFA NISY TALOHAN’I ABRAHAMA I JESOSY
Nampianatra fahamarinana lehibe hafa i Jesosy, raha mbola tao Jerosalema tamin’ny Fetin’ny Tranolay. Vao avy nilaza taminy ny Jiosy sasany hoe: ‘Taranak’i Abrahama izahay, ary mbola tsy andevon’iza na iza mihitsy.’ Hoy i Jesosy: “Fantatro fa taranak’i Abrahama ianareo. Mitady hamono ahy anefa ianareo, satria tsy mahazo vahana ao am-ponareo ny teniko. Izay efa hitako tamin’ny Raiko no lazaiko, ary ianareo manao izay efa renareo tamin’ny rainareo.”—Jaona 8:33, 37, 38.
Mazava ny tiany holazaina: Tsy mitovy ny Rain’izy ireo. Tsy azon’ireo Jiosy izany ka namerina nilaza izy ireo hoe: “I Abrahama no rainay.” (Jaona 8:39; Isaia 41:8) Taranak’i Abrahama, naman’Andriamanitra, tokoa izy ireo ka nihevitra fa nanompo an’Andriamanitra toa azy.
Nahagaga fa hoy i Jesosy: “Ataovy àry ny asan’i Abrahama raha zanak’i Abrahama ianareo.” Manahaka ny rainy mantsy ny tena zanaka. Hoy koa i Jesosy: “Mitady hamono ahy anefa ianareo, dia izaho izay nilaza taminareo ny marina reko tamin’Andriamanitra. Tsy mba nanao izany i Abrahama.” Hoy izy avy eo: “Ianareo manao ny asan’ny rainareo.” (Jaona 8:39-41) Nampieritreritra izany.
Mbola tsy azon’ny Jiosy hoe iza ilay rain’izy ireo resahin’i Jesosy. Nilaza izy ireo fa zanaka ara-dalàna, ka niteny hoe: “Tsy teraka avy tamin’ny fijangajangana izahay. Iray ihany ny Rainay, dia Andriamanitra.” Marina ve izany? Hoy i Jesosy: “Tokony ho tia ahy ianareo raha Andriamanitra no Rainareo, satria avy tamin’Andriamanitra no nivoahako sy nahatongavako eto. Tsy tonga araka ny nahim-poko velively aho, fa Izy no naniraka ahy.” Sady nanontany i Jesosy avy eo no namaly hoe: “Nahoana no tsy azonareo izay lazaiko? Satria tsy zakanareo ny mihaino ny teniko.”—Jaona 8:41-43.
Efa nasehon’i Jesosy ny vokatry ny fandavana azy. Nilaza mivantana anefa izy teto hoe: “Ianareo avy amin’ny Devoly rainareo, ary izay irin’ny rainareo no tianareo hatao.” Hoatran’ny ahoana ny rain’izy ireo? Hoy i Jesosy: “Mpamono olona hatrany am-piandohana izy, ary tsy nifikitra tamin’ny marina.” Hoy koa izy: “Izay avy amin’Andriamanitra dia mihaino ny tenin’Andriamanitra. Izany no tsy ihainoanareo, satria tsy avy amin’Andriamanitra ianareo.”—Jaona 8:44, 47.
Tezitra ny Jiosy ka namaly hoe: “Tsy marina ve ny voalazanay fa Samaritanina tokoa ianao sady misy demonia?” Nanambany azy izy ireo rehefa niantso azy hoe “Samaritanina.” Tsy niraharaha an’izany anefa i Jesosy fa hoy izy: “Tsy misy demonia aho, fa manome voninahitra ny Raiko, fa ianareo kosa tsy manome voninahitra ahy.” Tena tsy nety ny nataon’izy ireo. Nampanantena mantsy i Jesosy hoe: “Raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba ho faty mihitsy izy.” Tsy midika izany hoe tsy ho faty mihitsy ny apostoly sy izay nanara-dia an’i Jesosy. Tsy hiharan’ny fandringanana mandrakizay na ny “fahafatesana faharoa” kosa izy ireo. (Jaona 8:48-51; Apokalypsy 21:8) Tsy hatsangana amin’ny maty mantsy izay hiharan’izy io.
Noraisin’ny Jiosy ara-bakiteny ny tenin’i Jesosy, ka hoy izy ireo: ‘Fantatray tokoa izao fa misy demonia ianao. Efa maty i Abrahama, ary maty koa ny mpaminany, nefa ianao milaza hoe: “Raha misy mitandrina ny teniko, dia tsy handia fahafatesana mihitsy izy.” Ianao angaha lehibe noho i Abrahama rainay, izay efa maty? Fa manao anao ho iza moa ianao e?’—Jaona 8:52, 53.
Tian’i Jesosy ho azon’ny olona fa izy no Mesia. Tsy tonga dia novaliany anefa ilay fanontaniana hoe iza izy. Hoy kosa izy: “Tsinontsinona ny voninahitro raha manome voninahitra ny tenako aho. Ny Raiko no manome voninahitra ahy, dia izy izay lazainareo fa Andriamanitrareo. Tsy fantatrareo anefa izy, fa izaho mahalala azy. Raha milaza aho fa tsy mahalala azy, dia mpandainga tahaka anareo koa.”—Jaona 8:54, 55.
Hoy indray i Jesosy momba an’ilay razamben’izy ireo, izay tsy nivadika: “Ravoravo erỳ i Abrahama rainareo noho ny fanantenana hahita ny androko, ary nahita izy ka ravoravo.” Nino ny fampanantenan’Andriamanitra i Abrahama, ka niandrandra ny hahatongavan’ny Mesia. Gaga ny Jiosy ka niteny hoe: “Mbola tsy dimampolo taona akory ianao, koa efa nahita an’i Abrahama ve?” Hoy i Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa mbola tsy ary akory i Abrahama, dia efa nisy aho.” Anjely mahery tany an-danitra izy talohan’ny naha olombelona azy, ary izay no tiany holazaina.—Jaona 8:56-58.
Tezitra be ny Jiosy rehefa nilaza i Jesosy hoe efa nisy talohan’i Abrahama izy. Saika hitora-bato azy izy ireo, nefa lasa izy ary tsy naninona.
Ahoana no nampisehoan’i Jesosy fa tsy mitovy ny rainy sy ny rain’ny fahavalony?
Nahoana no diso ny Jiosy rehefa nanizingizina fa i Abrahama no rain’izy ireo?
Nahoana no nolazaina fa “tsy handia fahafatesana mihitsy” ny mpanara-dia an’i Jesosy?
Hizara Hizara Abrahama sa ny Devoly no Rain’izy Ireo?